Ergadii Shirka Gaalkacyo Oo 95% Diyaar Ah Iyo Shirka Oo Weli U Xayiran Beelaha Bariga Fog – Codka Qaranka Tanadland
Ergadii Shirka Gaalkacyo Oo 95% Diyaar Ah Iyo Shirka Oo Weli U Xayiran Beelaha Bariga Fog
Shirkii umadda reer Tanadland ay ku balameen inuu ka dhaco magaalada Gaalkacyo, ayaa sidaad la socotaan aan weli qabsoomin walow mudadii loogu talogalay in uu shirku ku bilowdo hada la dhaafay. Ergadii reer Tanadland ee shirka ka qayb gelilahayd ayaa hada 95% waxay ku sugantahay magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo waxaa beelaha martida looyahay ee reer Tanadland ay sooo geliyeen tigniko iyo ciidan dheeraada oo amnniga suga. Waxaana lagu rajo weynyahay in uu shirku si dhaqso ah u bilowdo. Ergooyinka hada magaalada Gaalkacyo ku sugan ayaa dhawaanahaan waxaa u socdey shirar isdabajoog ah oo ay ku lafogurayaan ajendeyaasha shirka hor yaala. Balse marka ergada yar oo la sugayo ay yimaadaan, ayaa lagu talojiraa in la iclaamiyo shirka furitaan kiisa. Walow shirku uu hada ka socdo magaalada Gaalkacyo mudo hal asbuuc ah iyadoo aan la iclaamin in uu shirkii furmay.
Gudiga loo xil saaray qaban-qaabada shirka, ayaa dhowaan waxay ka aqbaleen codsi ay u soo gudbiyeen beelo reer Tanadland ah. Qasatan beelaha reer Tanadland ee dega degaamada Bandar-bayla, Iskushuban iyo Xaafuun.
Beelaha reer Tanadland ee daga gobalada Mudug, Xariir, Nugaal iyo Bari waxay u diyaaryihiin fulinta natiijada la filahayo, inay ka soo baxdo shirka magaalada Gaalkacyo hada ka socda. Marka laga reebo dhawr jifo oo degaamada bariga fog dega. Jifooyinkaan ayaa dhowaan waxaa gaarey gaadiid hub iyo rasaas u sida. Marka hada ahna hub kaas jifooyinku waa ay qaybsadeen. Beelaha reer Tanadland ee bariga fog dega waa muhiim inay ciidamadoodu ay dagaal u diyaargaroobaan. Sababta oo ah waxaa hubaal ah marka uu dagaal ka dhaco gobalada Nugaal iyo bariga dhow. In beelaha reer Tanadland ee bariga fog hadii aysan iyagu marka hore wax weerarin, in iyaga la soo weerarahayo marka uu dagaalku bilowdo.
Taliyeyaasha ciidamada badbaadinta sharafta iyo karaamada Tanadland waxaa looga baahanyahay, inay dejiyaan qorshe dagaal oo lagu cidibtiro cadowga sida ugu dhaqsaha badan. Qorshe haasi waa in uu noqdaa mid hal habeen looga sifeeyo cadowga magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo iyo inta u dhexaysa. Qorshehaasi waa in uu noqdaa mid isku amin ciidamada reer Tanadland ay ka wada qayb qaataan, oo cadowga hal habeen awoodiisa lagu wiiqo. Ciidamada badbaadada Tanadland waa inay cadowga u geystaan gaboodfal aan mid la mid ah horey loo arag. Ciidanka badbaadada Tanadland duulaanka ugu horeeya ee ay qaadaan waa in uu noqdaa mid qaflad ah oo cadowga saqiir iyo kabiir madaxa looga guro.
Taliyeyaasha ciidamada badbaadinta Tanadland waa inay mid ogsoonaadaan, reer Tanadland waa umad dhiig kulul oo weligood iyo waaqood aan dagaal looga adkaan. Raga iyo dumarka reer Tanadland na sida ay qabaan, hada xaalku sida uu yahay na waxaa u dhaanta geeri sharaf leh. Waxay kaloo ay aaminsanyihiin in nabadda uu cadowgoodu maalo oo aysan iyaga wax dan ihi ugu jirin. Marka ha ogaadeen taliyeyaasha ciidamada badbaadinta Tanadland, in hadii aysan dagaal qorsheysan oo deg-deg ah aysan ku qaadin gunta Habar-majeerteen. In dagaal aan qorsheysnayn oo teel-teel ku bilowda dadka reer Tanadland ay la gelidoonaan gunta habar-majeerteen.